Wararka - Albaabka ugu wanagsan ayaa quful 2021 si aad u ilaaliso amaanka gurigaaga
Furayaashaada kaga tag albaabka – qufulkan caqliga leh waxa lagu furi karaa furaha furaha, faraha, casriga iyo wax ka badan
ByPete Wise04 Febraayo 2021A
qufulka smart waa habka gelitaanka albaabka kaas oo adeegsada tignoolajiyada ka sii casrisan furaha is-hoosaysiinta.Tani waxay la macno noqon kartaa mid kasta oo ka mid ah dhowr siyaabood ayaa loo isticmaalaa in lagu furo albaabka, oo ay ku jiraan casriga ah, faraha, fob, kaarka ama gelitaanka furaha furaha.Qufulo badan oo caqli badan ayaa lagu furi karaa dhowr ka mid ah agabyadan.
Doorashada quful caqli badan ayaa inta badan ah su'aal ah in la helo mid ku habboon albaabka aad rabto inaad ku rakibto. Quful kasta oo caqli-gal ah wuxuu ku shaqeyn doonaa oo keliya albaabbada qaarkood, iyadoo lagu saleynayo arrimo ay ka mid yihiin nooca qufulka ee horay loogu rakibay albaabka, iyo dhumucda albaabka iyo alaabta.Had iyo jeer hubi liiska alaabta si aad u hubiso in qufulku uu ku habboon yahay albaabkaaga, ka hor intaadan iibsan.
Tixgelinta kale ee muhiimka ah ee iibsadayaal badan ayaa ah habka hawlgalka.Qaar ka mid ah qufullada smart waa kuwo toos ah, oo leh dhowr habab oo lagu furayo sida faraha iyo furaha furaha.Kuwo kale waxay ku daraan awood ay ku furaan albaabka meel fog, ama meel u dhow iyada oo loo marayo Bluetooth, adoo isticmaalaya casriga ah.Qaybtan horumarsan ee qufullada smart waxay si gaar ah u fududayn kartaa in dadka la siiyo inay galaan guri markaad maqan tahay.
Haddii aad qorsheyneyso inaad rakibto qufulkaaga smart, ogow inaad u baahan karto dalool aan xadhig lahayn si aad u sameyso godadka lagama maarmaanka ah ee albaabkaaga.Ku rakibida qufulku waxay noqon kartaa hawl DIY ah oo si cadaalad ah u lug leh, sidaa darteed waxaan kugula talin lahayn daawashada fiidiyoowga casharka rakibida qufulka khuseeya YouTube, ka hor intaadan go'aansan inaad adigu qabato shaqada.Ama, si aad nolol sahlan u hesho, ka raadi qalab quful caqli leh oo aaggaaga ah.
Sawir-faraha Ultraloq UL3-BT-SN iyo Qufulka Lever-ka ee Taabashada
Ultraloq UL3 Taxanaha Smart Lock wuxuu ku siinayaa badbaado horumarsan xirmo si cajiib leh loo heli karo.Waxaa jira dhowr tillaabo oo cadaalad ah in la raaco, laakiin kuwan si wanaagsan ayaa loogu sharraxay hagaha rakibidda qufulka.Tilmaam gaar ah oo waxtar leh ayaa ahaa qaabka daloolka, kaas oo aad si fudud u laabi karto albaabka oo aad ka dhex daadin karto.
Waxaa laga yaabaa in waxa ugu fiican ee ku saabsan qufulkani ay tahay siyaabo kala duwan oo ammaan ah oo uu ku siinayo inaad albaabka ku furto, oo leh faraha, koodka, casriga iyo garaaca-garaacida dhammaan taageerayaashiisa, oo ay la socdaan gelitaanka furaha oo casri ah.Isku dhafkan deeqsinimada leh ee hababka gelitaanka waxaa dhamaantood laga geli karaa qufulka ku xiran app-ka, kaas oo xiriiriya koodka iyo faraha qaarkood shakhsiyaadka aad u xilsaartay.Tani waxay ku iman kartaa mid aad waxtar u leh haddii aad leedahay dad badan oo ka socda oo ka socda hantidaada.
Waxaan aad ula dhacay bilicda Taxanaha UL3.Labada gacan ee nikkel ee satin (gudaha iyo dibadda) waa kuwo culus oo siman, furaha qufulku wuxuu u muuqdaa mid fiiqan sidoo kale.
£257 |guri guri
Yale Keyless Smart Lock ku xiran
Ma ogtahay waxa?Furayaal ku filan iyo wax aan macno lahayn.In ku filan oo ka mid ah waxay lumiyeen fadhiga fadhiga iyo gaadiidka dadweynaha.Qufulka casriga ah ee Yale Keyless Connected Smart Lock wuxuu meesha ka saarayaa furayaashii hore u lahaan jiray oo dhan, isagoo ku tiirsan gelitaanka koodhka birta, kaadhka furaha, fob fog, ama taleefanka casriga ah ee ku xidhan Amazon Alexa ama Samsung SmartThings.
Qufulkani waxa uu leeyahay astaamo ammaan oo cajiib ah, oo ay ku jiraan qaylo-dhaan dhawaqeed aan wacnayn iyo sireed loogu talagalay in laga ilaaliyo tuugta.Way fududahay in la rakibo, waa haddii aad haysato 60mm nightlatch (haddii kale, mid gooni ah ayaad u iibsan kartaa).
Waxaan u maleyneynaa in qufulkani uu si dhab ah ugu muuqdo gudaha gudaha iyo dibadda albaabka.Awoodda kor loogu qaadayo qufulka qufulka iyada oo lagu hayo batari 9V ah oo ku hoos jira jidhka hore ee qufulku waxay noqon kartaa badbaado haddii uu batarigu kaa dhamaado markaad guriga ka maqan tahay.
Nuki Combi 2.0 (Nuki Smart Lock 2.0 iyo Nuki Bridge)
Halkan waxaa ah quful caqli badan oo farqi ah.Nuki Smart Lock 2.0 wuxuu ku nool yahay gudaha albaabkaaga, wuxuuna u adeegsadaa taleefankaaga casriga ah fure ahaan marka aad u dhowdahay, bannaanka guriga.
Nidaamkan gaarka ah wuxuu ka dhigayaa Nuki Smart Lock 2.0 ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay isticmaaleyaasha raba inay ku hayaan gacan dhaqameed xagga hore ee albaabkooda.Qufulka Smart laftiisu wuxuu u muuqdaa mid aad u qurux badan dhabarka albaabka, sidoo kale.
Si aad sida ugu wanaagsan uga faa'ideysato Nuki Smart Lock 2.0, waxaan kugula talineynaa inaad ku isticmaasho Nuki Bridge - qalab ku xirma godka korontada oo awood u siinaya in qufulka lagu shaqeeyo meel fog iyadoo loo marayo casriga.Tani waxay sahlaysaa in aad albaabka u furto wadayaasha alaabta, qandaraaslayaasha iyo kuwa kale ee soo wacaya markaad guriga ka maqan tahay.
Nuki Smart Quful 2.0 - £193.13 |Amazon Nuki Bridge - £ 89 |Amazon
Yale Conexis L1 Qufulka albaabka smart ee aan furaha lahayn
Mid ka mid ah waxyaalihii ugu horreeyay ee kugu dhufto markaad ka soo saarto qufulkan sanduuqa waa dhererkiisa.Adag, culus oo ku qalabaysan tillaabooyinka amniga oo ay ku jiraan sifa koodka biinanka oo khaldan iyo alaarmiga gudaha ku dhex jira, kani waa quful aan lagu khalkhal galin.Sidoo kale waa qufulkii ugu weynaa ee aan la kulanno - odhaah dhab ah oo ah albaabka gurigaaga.
Isticmaalka buug-tilmaameedka oo keliya, rakibidda qufulka ayaa muujisay wax yar oo dhib badan.Waxaan kugula talineynaa lasocoshada fiidiyaha waxbarshada ee wanaagsan ee Yale ee YouTube.Waxaa jira saddex baakadood oo hagaajin ah oo leh qaybo loogu talagalay inay ku habboon yihiin albaabbada dhumucdooda kala duwan, min 44mm ilaa 70mm.
Laga bilaabo £189 |Amazon
12-ka ugu fiican ee nadiifiyaha xadhkaha-la'aanta ah ee 2020 ee dhammaan miisaaniyadaha
Heshiisyada TV-ga ugu Fiican UK: qiimo jaban oo laga helo TV-yada Ogosto
Nadiifiyeyaasha vacuum-ka ee ugu fiican ee 2020 ayaa dib loo eegay
Heshiisyada tignoolajiyada Jimcaha Madoow ee ugu wanaagsan UK 2020: waxa la filayo sanadkan
Qufulka Masterka ee Bannaanka Qufulka Bluetooth
Haddii aad raadinayso quful xariif ah si aad u ilaaliso daadadaada ama dhismahaaga, suufka dibadda ee Masterlock wuxuu noqon karaa ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo lagu sahamiyo.Qalabkan xariifnimada leh waxa lagu furi karaa abka talefanka gacanta ee ku xidhan, isaga oo si sahal ah, ammaan ah u gelaya mulkiilaha, ama cid kasta oo ay doortaan inay la wadaagaan gelitaanka.Shackle boron-carbide waxay u muuqataa mid adag.
App-ka Master Lock Vault Home ee loo isticmaalo in lagu shaqeeyo qufulka ayaa horumar weyn ku ah abka Master Lock ee hore ee aan tijaabinay.Waxaan runtii u aragnay inay fududahay in lagu daro quful cusub oo aan dejino koodka gelitaanka abka dhexdiisa.
HAIFUAN 304 Smart Digital albaabka Quful HFA-5300-35
Qufulkan birta-yar ee fudud ee summada Shiinaha ee HAIFUAN waa mid ka mid ah qufullada caqliga leh ee ugu quruxda badan ee aan la kulannay.Waxaan si gaar ah u jecelnahay nambarada buluuga ah ee ku yaal bandhigga dhijitaalka ah iyo astaanta caatada ah ee jirka ugu weyn iyo gacanta qufulka dibadda.Marka laga soo tago ku darida aan fiicneyn ee kelmadda 'SIRDOONKA' ee hoosta furaha, waxaan u maleyneynaa in ay u muuqato mid qumman.
HAIFUAN 304 waa wax lagu farxo in la isticmaalo, ha ahaato kaarka ama lambarka sirta ah.La'aanta ku habboonaanta casriga ah ayaa laga yaabaa inay ka fogaato isticmaaleyaasha qaarkood, laakiin waxaan u aragnaa inaan helno isku dhafka kaararka iyo helitaanka koodka ayaa ku filan.
Mid ka mid ah dhinaca hoose ee 304 waa in tilmaamaha rakibaadda ay si gaar ah u adag tahay in la raaco.Waxaan kugula talineynaa daawashada muqaal waxbarsho YouTube beddelkeeda.
Samsung Digital Door Quful
Doorashadan ka timid Samsung waa quful dhijitaal ah oo si cajiib leh u hagaagsan, kaas oo kor u qaadi doona oo kaliya muuqaalka albaabkaaga.Xagga hawlgelinta, qufulku waa fudud yahay, maadaama labada ikhtiyaar ee kaliya ee lagu furayaa ay yihiin KeyTag (kuwaas oo, lix ay ku jiraan) iyo furaha furaha.Nabadgelyada dheeraadka ah, furaha furaha iyo KeyTag labadaba waa la wada dalban karaa si albaabka loo furo.
Waxa aanu u qiimaynay qufulka albaabka casriga ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee laga heli karo suuqaQufulku wuxuu la jaanqaadi karaa dhumucdiisuna waxay u dhaxaysaa 35mm ilaa 50mm, oo lagu daray astaamo ay ka mid yihiin ikhtiyaarka lagu xakameynayo mugga furaha furaha ayaa kala saaraya alaabta.
ZKTeco PL10DB Quful Albaabka Sawirka Faraha ee leh Bluetooth (Gudaha)
ZKTeco PL10DB waa quful gudaha ah oo wax ku ool ah oo aad waxtar u leh oo leh 'cyber' quruxsan.Waxaan u maleyneynaa inay cadeyn karto door weyn oo lagu sugi karo boosaska sida qolalka guryaha la wadaago ama meelaha wax lagu kaydiyo ee ku dhexyaal goobaha ganacsiga.Hawlgalku waa iyada oo loo marayo faraha, lambarka sirta ah ama furaha - ikhtiyaaro isku dhafan kuwaas oo dhab ahaantii dammaanad qaadaya inaad mar walba heli doonto hab aamin ah oo aad albaabka ku furto.
Qufulkani waxa uu leeyahay astaamo aad u qurux badan oo ka baxsan inta badan tartamayaasha.Tusaale ahaan, gacanku waa la rogi karaa: waxaad ku habboonaan kartaa inaad wejiso bidix ama midig, iyadoo ku xidhan dookhaaga.Dhinaca hoose, PL10DB dhab ahaantii looma isticmaali karo albaabka dibadda, maadaama aysan ku habboonayn in lagu shaqeeyo heerkul qabow.
Waad ku mahadsantahay isku darka habaynta la heli karo, 5-in-1 ku shaqaynta badan iyo bandhiga dhijitaalka ah ee caqliga leh, waxaanu u magacaabaynaa Ultraloq UL3 BT ES-ka ugu Sareeya ee ugu Wanaagsan.Haddii aad doorbidi lahayd beddelka ku nool gudaha albaabkaaga oo keliya, Nuki Smart Lock 2.0 ayaa noqon doonta doorasho weyn.